आधुनिक कृषि प्रणाली र चुनौती
2020-09-07 04:09 Hamro Biratnagar
विधिको विकास हरेक क्षेत्रमा भएको छ । सानादेखि ठूला निर्माणका कार्यका लागि पनि औजार तथा उपकरणको आविस्कार भैसकेको छ ।
प्रविधिको विकासले कृषि गर्ने पुरानो तथा झनझटिलो प्रक्रियालाई पनि सजिलो र सहज बनाएको छ जुन अहिलेको जनसंख्याको चाप र कृषियोग्य जमिनको विनासलाइ हेर्ने हो भने अति आवस्यक नै रहेको छ । झन् नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ युवा जनशक्ति बाहिर पलायन हुने क्रम बढ्दो छ त्यहाँ आधुनिक उपकरण त नभै नहुने यंत्रको रुपमा मान्न सकिन्छ ।
कस्तो छ हाल नेपालमा कृषक र कृषि गर्ने पद्धतिको अवस्था ?
"नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो" अहिले यो नारा केवल कागज र स्कुले किताबमा लेख्न र परिक्षा को निबन्धमा लेखी अङ्क बडाउने कार्यको लागि मात्र सीमित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
हरेक साल नेपालमा भारत तथा चीनलगायतका छिमेकी मुलुकवाट आयात हुने सागसब्जी र फलफूलको तथ्यांक हेर्ने हो भने अब नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर लेख्न र पढ्न अवस्य लाज लाग्नु पर्ने हो । नेपाल जस्तो सानो मुलुक अनि कम जनसंख्या भएको मुलुकमा आफ्नै देशको नागरिकका आवश्यकता पूरा हुन नसक्नुले हामी कृषीप्रधान देश भनी फुर्ती लगाउनु कुनै औचित्य र फाइदाजनक नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
कृषियोग्य जमीन अनि मौसम नेपालको लागि एक वरदान हो तर प्रकृतिको यस उपहारको सही फाइदा लिन नसक्दा आज पनि हामी गरीब र पिछडिएका मुलुकको सूचिमा आउनु अतिनै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।
नेपालमा कृषिमा क्रान्ति नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो त ऊर्जाशील युवाले कृषिमा अवसर नदेखी विदेशतिर पलायन हुनु र सरकारले पनि उचित लगानी र रहात प्रधान गरी आकर्षण गर्न नसक्नु मुख्य कारण मान्न सकिन्छ ।
घरमा अशक्त बूढाबूढी र केटाकेटी मात्र रहने र खेत बाझै राखी विदेश पलायन हुनुले नेपाललाई कृषिमा अझ पछी धकेली रहेको छ । अर्को मुख्य कारणमा प्रकृतिको असहयोग र सरकारले कृषि क्षेत्र प्रति काम र भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगर्नु पनि हो । मौसमी समस्या मानिसको हातमा नरहे तापनि यसको पूर्वतयारी र पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यसले ज्यादा नोक्सान नपुर्याउने निश्चित छ । तर हरेक साल विनियोजन भएको बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग भएको छ त्यसको फाइदा कृषकले कसरी पाइरहेका छन् त्यसको हिसाब भने सायदै कोहीसँग होला?
बाली लाउने वेला सम्म खाद्य मलको अवाभले सरकारको कृषि र कृषक प्रतिको ध्यान कतिको छ स्पष्ट पार्छ । अझ कृषकलाई उचित परामर्श र ज्ञानको अभावले कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव त छँदै छ । नेपालमा आधुनिक कृषिप्रतिको ज्ञान र महत्त्व कम हुनुले नेपाललाइ कृषि क्षेत्रमा अझ नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
आधुनिक कृषि प्रणालिमा जादाका फाइदा र समस्या ?
नेपालमा आधुनिक कृषि प्रणाली अत्यावश्यक र महत्व भैसकेको छ विशेष गरी अहिलेको समयमा जहाँ युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढ्दो छ र खेतीयोग्य जमीन विना कुनै तयारी अव्यवस्थित रूपमा शहरीकरण र औधोगिककरण गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
थोरै जमीनमा आवश्यक सबै सामाग्रीको खेती गरी आवश्यकता पूरा गर्नु एक ठूलो चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ । आधुनिक कृषि प्रणालीले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्ने र भविष्य नै यही रहेको कुरामा दुईमत अवस्य छैन ।
थोरै जनशक्ति र कम परिश्रममै काम गर्न सकिने आधुनिक प्रणालीमा खर्च पनि कम र जनशक्तिको अभावलाई पनि सजिलै आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ ।
आधुनिक कृषिमा थोरै लगानिमा पनि पुरानो पद्धतिभन्दा बढी फाइदा लिन सकिने भएकाले यसको महत्व अझ बढी रहेको छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाइ आधुनिक कृषि प्रणाली भित्र्याउन र प्रयोगमा ल्याउन भने उत्तिकै चुनौती रहेको छ ।
पहिलो चुनौती त आधुनिक उपकरणको खरिदमा पर्ने खर्चनै रहेको छ । सवै उपकरण बाहिरी मुलुकबाट आयत गर्न पर्ने भएकाले यसमा पर्ने लगानी र खर्च सामान्य कृषकको पहुँच भन्दा बाहिरको कुरा रहेको छ ।
अर्को समस्या त्यस उपकरणको प्रयोगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र कृषकमा साक्षरताको अभाव रहेको छ । आधुनिक उपकरणको संचालनका लागि राम्रो दक्ष जनशक्तिको विकास अतिनै महत्त्वपुर्ण रहेको छ ।
अत: बढ्दो जनसंख्या चाप र मानिसको कृषिप्रतिको रुचि घट्दै गएको यस अवस्थामा सरकारले सहुलियतमा ऋण प्रधान गर्न र धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई कृषिप्रति आकर्षण गरि पूर्वाधार निर्माण गर्न सके नेपालकै माग र आवश्यकता लाई नेपालमै परिपूर्ति गरी निर्यातसम्म सम्म गर्न सकिने अवस्था आउन समय लाग्ने छैन ।
« जबरजस्ती करणीकाे आरोपमा प्रहरी जवान पक्राउ
राेकिएकाे जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा परिपत्र »